Muchinjikwa-Domain Canonicals HAZVISI zvekuShandiswa kwenyika | Martech Zone
Chitatu, December 12, 2012 Chipiri, Gunyana 24, 2013 Nikhil Raj
Tsvaga Injini Kugadziridza kwemawebhusaiti epasi rese kwagara kuri nyaya yakaoma. Iwe unowana akawanda matipi online asi haufanire kushandisa ese matipi iwe aunonzwa. Tora nguva yekuongorora ruzivo rwaunowana online. Kunyange nyanzvi ichinyora kunge yakanyora, hazvireve kuti nguva dzese dzakarurama.
Nyaya iripo, Hubspot yakaburitsa ebook nyowani 50 SEO & Webhusaiti Matipi eInternational Marketer. Isu tiri vateveri ve Hubspot uye agency yedu inobvumidzwa Hubspot agency. Nekudaro, iri rekupedzisira ebook rakapa yakaipa tip iyo inogona kuwana SEO vanhu vari mumatambudziko kana vachigadzirisa avo epasi rese masosi. Isu takavabvunza pairi kuburikidza nemagariro uye takapa Google mareferenzi - asi hatina kuwana yakawanda yekuita kuti yaizogadziriswa. Nekuda kweizvozvo, tiri kunyora iyi positi kuyambira vaverengi vedu.
Iyo Yepasi rose SEO Zano
Paunenge uchishandisa zvinopfuura imwe yepamusoro-soro dura (TLD), Hubspot inokurudzirwa kushandisa iyo muchinjiko dura canonical tag kunongedzera yega yega yako saiti epasirese kudzokera kune yako yepamoyo saiti. Iyi haisi yakanaka tip uye ingatokanganisa yako SEO kuedza. Iyo rel = "canonical" tag anoshandiswa bvisa zvakapetwa zvemukati nyaya kubva kumawebhusaiti. Iyo inoshandiswa kutaurira Google iyo yakasarudzika vhezheni yeseti yemapeji ane akafanana akafanana zvemukati izvo iwe zvaunoda kuti Google iratidze uye iratidze mune yayo SERP. Vashandi veSEO vanoraira kuti pese panogadziriswa pazvinhu zvakapetwa USASHANDISA mamaki eecanonical.
Heino zano iro Hubspot zvakapiwa:
Muchinjikwa-Domain Canonicals Haisi Mhinduro
Ngatifungei ndine ma3 gTLDs kune yangu epasi rese webhusaiti - mysite.com, mysite.co.uk, uye mysite.de. mysite.com uye mysite.co.uk vane zvakafanana zvemukati; mysite.de ine zvakafanana zvirimo asi muchiGerman mutauro.
Ngatishandisei zvakataurwa nebhuku iri. Saiti yangu huru isitesite.com. Saka ndiri kuzoisa canonical link se mysite.com mu .co.uk uye .de domains. Kana Googlebot yasvika kune yangu .co.uk domain inotevera iyo canonical link tag uye indexes yangu .com domain.
Kana ndikaita izvi, Google haizombo index yangu .co.uk uye .de domains uye aya mapeji achaita haimboonekwi mudunhu Google kutsvaga! Ini ndicharasikirwa nemasimba ese andakavakira kumatunhu ematunhu kune .com saiti!
Kuita hreflang ndiyo Yakakodzera Mhinduro
Kana iwe uchida kuchengeta iwo mawebhusaiti mawebhusaiti uye kana iwe uchigona kuvaka chiremera kune yega nyika kodhi kodhi TLDs, USASHANDISE canonical tag. Google chaizvo akapindura mubvunzo uyu mune yavo rubatsiro Webmaster Central foramu (Thanks to Anju Mohan). Google yakati "usashandise canonical tag" kana iwe uchida kuti mawebhusaiti ako emarudzi mazhinji aratidzwe neGoogle. Google yakati shandisa iyo rel = "chinjana" hreflang = "x" tag panzvimbo.
The rel = "chinjana" hreflang = "x" yakaunzwa neGoogle yakanangana nemawebhusaiti epasi rese - mitauro yakawanda uye mitauro yakawanda. Inobatsira Google kuratidza iyo chaiyo vhezheni yenzvimbo yako yedunhu kune vanotsvaga. Muchiitiko chiri pamusoro, ini ndaizoisa hreflang tag se:
Wedzera iyi seti kumusoro weumwe neumwe wedunhu mapeji uye chengeta mupfungwa kuti hreflang tag yakatarwa peji. Zvino kana mumwe munhu akatsvaga sevhisi yangu kuGoogle UK, icharatidza iyo chaiyo mutauro vhezheni yewebhusaiti yangu inova mysite.co.uk.
Tags: muchinjiko-duramuchinjiko-dura canonicalshreflangyepasi rose seokudyidzana kwenyika
Uri 100% chaiko. Ini ndichangobva kupfuura nenyaya iyi nekambani yepasi rese. Kubata kwakanaka!
Zvakanaka mumwe! Tinotenda nekugovana… tinofanirwa kupinda mune izvi nekukurumidza nemawebhusaiti edu pachedu…
Nzira yekuenda nikki !! rel = "chinjana" hreflang = "x" yaive ruzivo rutsva kwandiri ...
Sei kana "Google isingatarise shanduro dzemitauro yekune dzimwe nyika kunge dzakadzokororwa zvemukati" isu tichifanira kushandisa hreflang tag se
Kana iwe uine mutauro wekunze vhezheni yeiyo saiti mune yepasi domeini kana mune imwe gTLD saka hapana chikonzero chekushandisa iyi tag sezvo iwe usina chero zvakapetwa zvemukati. Iri taki rinonyanya kubatsira kana iwe uine zvakafanana zvemukati mumutauro mumwe nekusiyana kwedunhu semuenzaniso une zvemutauro weChirungu zvemukati zvakanangwa kune vaverengi muUSA neUK uyezve kana iyo yekune dzimwe nyika vhezheni iri pafafura. Unogona kushandisa tag iyi kutaurira Google kuti kune vanhu vari kutsvaga muGoogle UK vhezheni yako yaunofarira yekuratidza mumhedzisiro yekutsvaga iUK vhezheni yako saiti.